Ihe doro anya na-awakpo Buzzwordsmithiness On Contact | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 22, 2016 Tọzdee, Disemba 22, 2016 Douglas Karr
Ezi enyi m ọtụtụ afọ bụ Steve Woodruff, onye kwupụtara onwe ya (ma nwee ezigbo nkà) Onye na-ahụ maka ihe doro anya, na-aga n'ihu ịkekọrịta ụfọdụ ahịa na-adịghị mma-ikwu okwu n'etiti weebụsaịtị na profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ na-akọrọ ya oge niile kachasị amasị mụ na m site na afọ ole na ole gara aga:
Anyị ebutela ụzọ ọhụrụ maka nkwado, mmepe nke ndị ahịa na-adabere n'ụkpụrụ nke usoro mmegharị mgbagwoju anya. Nke a bụ atụmatụ ọhụrụ maka atụmatụ maka ụwa nke na-agbanwe mgbanwe usoro miri emi: echiche dị iche iche banyere imepụta uru, ụzọ dị iche iche maka ịzụ ahịa na azụmaahịa, ebe dị iche iche iji zoo ma chee echiche. Ihe ndi ozo bu ihe ohuru nke asọmpi. Ndị ụlọ ọrụ ndị maara etu esi edozi ma jikwaa onwe ha dị ka nyiwe maka ịhazi onwe ha nwere ike ime ka uto Google dịka ihe ndebiri.
Kedu ihe nke ahụ pụtara? Ọtụtụ okwu na enweghị m ntụzi-aka.
Achọrọ m ide ederede a ruo nwa oge, ụnyaahụ ezigbo enyi m ọzọ, Akara Schaefer, bụ mkpali. Akara na-akọrọ ụghalaahịa edenyere Palmolive byline, Mwakpo Griiz na kọntaktị.
N'ihi ya aha nke post a… Enwere m olileanya na Mark anaghị eche na m zuru echiche ahụ na post Facebook ya. Oh, ọ ga-ekwukwa nke ọma na ngalaba Mark bụ businessgrow.com… O nwere ihe doro anya karịa nke ahụ?
Ihe mmekọrịta Steve na-ata m ihe karịrị otu afọ. Agencylọ ọrụ anyị na ebe nrụọrụ weebụ bụ mkpokọta okwu okwu okwu ọhụụ nke nwere ike ịmị ihe ịtụnanya. Oge ọ bụla Steve kesara okwu na-enweghị isi site na weebụsaịtị, achọpụtara m onwe m imepe ihe nchọgharị iji jide n'aka na ọ nwetaghị ya DK New Media!
N'ihi ya, a kpaliri m ime ya idozi ihuakwụkwọ mbụ. Agara m m n'isi ihe mere ụlọ ọrụ na-eji anyị n'ụlọnga, na ya niile bịara otu ihe… anyị idozi ihe gbajiri na ha online ahịa. Ma ọ bụghị mgbe niile otu ihe… mgbe ụfọdụ ọ bụ ha mbọn, mgbe ụfọdụ ha oyiri, mgbe ụfọdụ, ha search ogo. N'ihi ya, edere m obere ederede mara mma nke na-edochi naanị otu okwu na ahịrịokwu ahụ.
Ntughari ohuru ohuru nke edeputara ya doro anya bu:
Ahịa Digital gị anaghị Akwọ __________. Anyị na-edozi nke ahụ.
Usoro anyị na-agbanye bụ Nsonaazụ, Nnabata, Ọkwá, Ndị ọbịa, Nchịkwa, Nduzi, Ndị na-eso ụzọ, Ego ha, Nbudata, Ntinye aka, Ntinye aka, ROI, atụmanya, Ntugharị, Ọgụgụ, Ojiji, Ndị na-ekiri, Upsells, Fans, Performance, Ahịa, Ndobe, Ndebanye aha, Uru, Mmata, na ina.
N'ezie, enwere m ike ịgbanye banyere usoro anyị gosipụtara, nke na-echere patent maka ịbawanye ntozu oke nke ndị ahịa anyị (akụkọ eziokwu)… mana gịnị ka nke ahụ bụ n'ezie pụtara? Ọfọn, ọ pụtara na anyị na-edozi ihe na-ezighị ezi. N'ime nkwekọrịta ọ bụla anyị nwere, nke ahụ bụ uche anyị na ihe anyị chọrọ ka ndị ahịa anyị lekwasị anya. Anyi choro ihu na anyi na achoputa oghere di na usoro ahia ha, ma nyere ha aka imeju oghere ndi ahu iji kwalite ahia ha.
Amaghị m na mmega ahụ iji pụta ngwa ngwa, nkwupụta doro anya bụ gbasara iwepu ma ọ bụ belata okwu. Nke a nwere ike bụrụ mmega ahụ nwere ike inyere gị aka iwepụta ihe doro anya site na iji ngwa ahịa na ahịa gị. Ekwenyere m na usoro m gabigara na-elekwasị anya na ihe anyị mezuru maka ndị ahịa anyị kama ilekwasị anya na ndị anyị bụ na ihe anyị nwere ike. Afọ ndị gara aga, edere m banyere ụlọ ọrụ teknụzụ mgbe niile ahịa atụmatụ n'elu uru.
Mgbe ị na-elekwasị anya n'ihe ị nwere ike karịa karịa ihe ị rụzuru maka ndị ahịa gị, echere m na nke ahụ bụ mgbe okwu okwu na-emebi!
Tags: ikikeMmatadoo anyamgbanwecopywritinginadownloadsnjikọ akaFans-eso ụzọeduAkara SchaeferarụmọrụuruatụmanyaọkwaNgụgụ isindebanyeahaResultsnjigideEgoROINkwado ire ahịaNtinye aka-Upssteve woodruffỌkụojijiNdị na-ekirindị ọbịa
Dee 22, 2016 na 11: 52 AM
M hụrụ n'anya ihe i mere na homepage - karịsịa "carousel" nke na-agbanwe agbanwe okwu, nke bụ echiche m na-atụle tupu. Bravo!
Jeffry Pilcher | Ahịa Ego
Dee 26, 2016 na 11: 07 AM
Ndị na-ere ahịa na ngwa ahịa / ụdị ụlọ ghọtara na ihe ị na-ere ga-edozi nsogbu ndị mmadụ. Ahịa gị ga-akọwapụta nsogbu ahụ ma nye azịza nke ọma - na-abụkarị obere okwu 5-10. Maka ebumnuche, ndị na-ere ahịa B2B aghọtaghị nke a. N'ọtụtụ ọnọdụ, ozi ahịa ahịa kachasị agbagha sitere na ngwọta azịza ahịa ndị a.
Ndị isi na ndị na-ede akwụkwọ na ụlọ ọrụ azụmaahịa hụrụ nnukwu okwu n'anya n'ihi na ọ na-eme ka ọrụ ha bụrụ nke ukwuu (ha chere na ha nwere ike ịkwụkwu ụgwọ maka ya). N'ikwu eziokwu, otutu enweghi nghota nke nzube ma nweghi obi ike ime nkwa di ike - ima atu, “anyi ga enyere gi aka dozie nsogbu X.”
Ọ bụrụ na ị nweghị ike ịgwa m - n’otu ahịrịokwu na bekee doro anya - ihe ị ga-emere m, azụmahịa m ma ọ bụ ezinụlọ m, mgbe ahụ ị nwere ọtụtụ ọrụ ị ga-arụ.